သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုနှစ်ကြိမ်တိုင် ကံထူးသူဆိုတဲ့ သတင်းအမှား
| 11 July 2020 6:01 AM GMT
ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပေါ်မှာ ဖြန့်ဝေနေတဲ့ "(17)ကြိမ်မြောက် အောက်ဘာလေ သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆု ကံထူးရှင်မှာ (11)ကြိမ် မြောက်အောင်ဘာလေထီဖွင့်ပွဲမှာလည်း သိန်းတစ်သောင်းဆု ပေါက်ခဲ့သူဖြစ်တယ်" ဆိုတဲ့ ပိုစ့်တစ်ခု ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့မှာ စတင်ပြန့်နှံ့နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီသတင်းမှာပါတဲ့ပုံဟာ မုံရွာမြို့ အောင်ဆုထူးပိုင် ထီဆိုင်ပိုင်ရှင်ရဲ့ ပုံသာဖြစ်ပြီး သိန်းတစ်သောင်းခွဲပေါက်သူမှာ သူ့ဆိုင်တွင် ထီထိုးခဲ့သူ အခြားတစ်ယောက်သာဖြစ်ပါတယ်။
ဖြန့်ဝေနေမှုတွေကို ဒီနေရာ၊ ဒီနေရာ၊ ဒီနေရာ နဲ့ ဒီနေရာတွေ မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ဒီသတင်းကို ရေးသားဖြန့်ဝေရာမှာ "မြန်မာပြည်မှာ ထီနှစ်ခါပေါက်ဘူးသူ ကံထူးရှင်ပေါ်လာပြီး..အောင်ဘာလေ (11)ကြိမ်မှာ သိန်းတစ်သောင်း… အခုလည်း (17)ကြိမ်မှာ သိန်းတစ်သောင်းငါးထောင်. .လူချင်းတူတယ် ကံချင်းမတူကြဘူးတဲ့.. မုဒိတာပွားမိပါတယ်ကံတရားရယ်.. အခုပေါက်တဲ့ ထီဆိုင်က အောင်ဆုထူးပိုင် ၁၇ကြိမ် ကျပ်သိန်း၁၅၀၀၀ဆုကြီး …. ည ၈၅၃၀၉၅ ဦးစိုးဝင်း မုံရွာေ အာင်ဆုထူးပိုင် မှဆွတ်ခူးသွားပါသည်။" ဆိုပြီးဖြန့်ဝေနေတာပါ။
ဒီသတင်းနဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး BOOM Myanmar က သတင်းဆန်းစစ်ချက်ပြုလုပ်ရာမှာ ဒီရေးသားဖြန့်ဝေနေမှုတွေဟာ သတင်းမှား သာဖြစ်ပြီး အခုဖြန့်ဝေနေသလို သိန်း၁၀၀၀၀ဆု ပေါက်ဖူးထားတဲ့ ထီဆိုင်ပိုင်ရှင်က သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆု ထပ်ပေါက် တာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီသတင်းနဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး မုံရွာမြို့အခြေစိုက် Monywa Gazette သတင်းဌာနကရဲ့ ဖေစ့်ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့က ဖော်ပြထားရာမှာ ၁၇ ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေထီ၏ သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုကို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကနီမြို့နယ် ဝရာကျေးရွာမှ ကားသမားတစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုသောင်းထိုက်လင်းမှ ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့တာသာဖြစ်ပြီး မုံရွာမြို့ အောင်ဆုထူးပိုင်ထီဆိုင်ပိုင်ရှင် ကိုစိုးဝင်း ဆိုသူပေါက်ခဲ့တာ မဟုတ်ကြောင်း ရေးသားထားပါတယ်။
"ကျွန်တော်ပေါက်တယ် ထင်ကြတာ၊ ဆိုင်က ဝန်ထမ်းကောင်မလေးရဲ့အစ်ကိုပေါက်တာပါ။ ဒီကိုလာရင်း ထီထိုးနေကြပါ။ အခု သူက ခရီးလွန်နေလို့ လှမ်းတော့ အကြောင်းကြားထားပါတယ်" လို့ ကိုစိုးဝင်းက Monywa Gazette သတင်းဌာနကို ပြောကြားထားတယ်လို့လည်း ရေးသားထားပါတယ်။ အောက်ဖော်ပြပါပုံကို ကြည့်ပါ။
မုံရွာဂေဇက်သတင်းဌာနရဲ့ မူရင်းသတင်းကို ဒီနေရာ မှာ ကြည့်ရှု့နိုင်ပါတယ်။
Claim Review : ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ အောင်ဘာလေကံထူးရှင် နှစ်ကြိမ်ကံထူးတယ်ဆိုပြီး သတင်းတွေဖြန့်ဝေနေတဲ့အတွက် BOOM Myanmar က သတင်းဆန်းစစ်ချက် ပြုလုပ်ထားပါတယ်။
Lottery Lottery Winner fake news Fake Page